BaaristaQuraanka.BlogSpot.com - Quraanka yaa qoray?: April 2010
Meeqo maalmood ayaa lagu haligay qoomkii Caad la dhihi jiray?
Quraanka wuxuu isku dhex khilaafayaa haligaadii qoomkii Caad ama dadkii Caad la dhihi jiray.
Labadaan aayadood ee hoos ku qoran waxay leehiyiin dadkii Caad la dhihi jiray waxaa lagu dirray dabayl qabow toddobo habeen iyo sideed maalmood oo israacsan.
"Caadna waxaa lagu halligay dabayl daran oo qabow." - waa aayada 6 ee suurada 69 (suurat Al-xaaqqah)
"oo lagu diray korkooda toddoba habeen iyo sideed maalmood oo israacsan, waxaadna arkaysaa iyagoo daadsan ood mooddo jirrid timir(dogob dhacay)." - waa aayada 7 ee suurada 69 (suurat Al-xaaqqah)
Sadexdaan aayadood ee hoos ku qoran waxay leeyihiin dadkii Caad la dhihi jiray waxaa korkooda lagu diray dabayl qabow daran maalin dhexdeed.
"Caadna way beenisay (xaqii), seese noqotay caddibaaddii Eebe iyo u digiddiisii." - waa aayada 18 ee suurada 54 (suurat Al-qamar)
"Waxaan ku dirray korkooda dabayl qabaw daran maalin baasaysan dhexdeed oo joogta ah." - waa aayada 18 ee suurada 54 (suurat Al-qamar)
"oo dadka siibaysa sida timir gunteedii la rujiyay." - waa aayada 18 ee suurada 54 (suurat Al-qamar)
Bal u fiirso is khilaafka ka dhex jira ayadahaan. Mid waxay leedahay waxaa Caad lagu diray dabayl qabow maalin dhexdeed oo joogta ah. Mida kalena waxay leedahay Caad waxaa lagu diray dabayl qabow toddoba habeen iyo sideed maalmood oo is raacsan. Haduu quraanka ilaahay hadalkiisa yahay ilaahay kala ma hadli lahayn ee waxaa qoray maxamad oo bini aadan ah. Taas waxay ku tuseysaa in quraanka uusan ahayn erayada ilaahey ee uu yahay erayada maxamad. Ilaahey hadalkiisa isma buriyo ee waxaa is buriya hadalka bini aadanka.
Posted by Maskaxda Xoree at 11:42 AM 3 comments: Links to this post
Labels: diinta islaamka, is burinta is burin, muxaadaro, quraanka
ilaahey wax ma dulmiyaa mase waa mid aanan wax dulmin?
Aayadaan hoos ku qoran waxay leedahay ilaahey ayaa cidduu doono yuu dulmiyaa, ruuxuu doono wuu hanuuniyaa.
"Ruuxe loo qurxiyay camalkiisa xun oo u arkay inuu fiicanyahay (ma lamid baa kaan saas falin), Eebe cidduu doono yuu dhumiyaa ruuxuu doonana wuu hanuuniyaa ee yeyna naftaadu ku tagin walbahaarkooda, Eebe waa ogyahay waxay samayne." - Waa aayada 8 ee suurada 35 (suurat Faadhir)
Aayadaan kale ee hoos ku qoran waxay leedahay dadka ilaahey ma dulmiyo ee ayagaa naftooda dulmiyay.
"Miyeyna ku soconin dhulka oy eegan siday ahaatay cidhibtii kuwii ka horeeyay (gaaladii Makaad) waxay ahaayeen kuwo ka daran iyaga kana xoog badan, dhulkana waybeerteen wayna dhiseen dhulka intay dhiseen wax ka badan. waxayna ula timid rasuuladoodii xujooyin, Eebana ma aha mid wax dulmiya, laakiin iyagaa naftooda dulmiyay. - Waa aayada 9 ee suurada 30 (suurat Ar-Ruum)
"Ruuxii camalfiican fala wuxuu u falay naftiisa, Ruuxii xumaan fala wuxuu dhibay naftiisa, Eebaheenna ma aha dulmiyaha Addoomada." - Waa aayada 46 ee suurada 41 (suurat Fussilat)
Bal u fiirso iska soo horjeedka ku dhex jira aayadahaan. Mid waxay leedahay ilaahey cidduu doono ayuu dhulmiyaa, mida kalena waxay leedahay ilaahey maaha mid wax dulmiya. Halkaan waxaa ku cad in uu quraanka uusan ahayn erayada ilaahey ee uu yahay hadalka maxamad. Haduu quraanka ahaan lahaa hadalka ilaahay, kala hadalk kuma jiri lahayn quraanka.
Qofkii caqli leh wuu garan karaa in caruurta ayan xataa sidaa u hadlin. Tusaale ahaan waa aniga oo dhahay "hoodahay waxay dulmisaa cidii ay doonto" cabaar kadibna dhahay "hooyadeey maaha mid wax dulmisa" kala hadalka noocaas ah wuxuu tusayaa qof walba oo caqli leh in quraanka uu yahay erayada maxamad ee uusan ahayn erayada ilaahay.
Posted by Maskaxda Xoree at 1:09 PM 7 comments: Links to this post
Labels: barashada, boqolsoon, diinta islaamka, islam, kala hadalka, muxaadaro, somali, somalia
Dadka ma xor bay u yihiin in ay ilaah rumeeyaan mise ilaah baa u doorta?
Aayadaan hoos ku qoran waxay leedahay dadka ma doortaan inay rumeeyaan ilaah ee ilaahey ayaa u doora.
"Nafuna ma rumeyso idanka Eebe ka dib mooyee, wuxuuna Eebe yeelaa xumaanta kuwaan wax kasayn korkooda." - Waa aayadada 100 ee suurada 10 (suurat Yuunus)
Aayadaan kale ee hoos ku qoran waxay leedahay dadka ayagaa doortay in ay ilaah rumeyn ama khasaariyey naftooda.
"Waxaad dhahdaa yaa leh waxa ku sugan samooyinka iyo dhulka, dheh Eebe, wuxuuna isasaaray naxariis, wuxuuna idin kulmin maalinta qiyaame shakina ma leh kuwa khasaariyey naftoodase ma rumaynayaan." - Waa aayada 12 ee suurada 6 (suurat Al-Ancaam)
Bal u fiiro u fiirso kala hadalka labadaan aayadood. Aayada hoose waxay leedahay kuwa khasaariyey naftoodase ma rumaynayaan. Aayada kalenna waxay leedahay Nafuna ma rumeyso idanka Eebe ka dib mooyee. Marka su'aashu waxay tahay sidee ayuu qofka u khasaariyay naftiisa maadaama uu ilaahay u doortay inuu khasaaro ama uusan rumeyn ilaah? Kala hadalkaan waxay ku tuseysaa in quraanka uu yahay erayada maxamad ee uusan ahayn erayada ilaahey sababtoo ah ilaahey kalama hadlo.
Posted by Maskaxda Xoree at 11:59 AM 1 comment: Links to this post
Yaa dadka dhumiya ilaah mise sheydaan? kala hadalkaan u fiirso
Aayadaan hoos ku qoran waxay leedahay sheydaanka ayaa dadka dhumiya.
"dhab ahaan wuxuu udhumiyay (shaydaan) xaggiina dad badan miyaydan wax kasaynin." - Waa aayada 62 ee suurada 36 (Suurat Yaasiin)
Aayadaana hoos ku qoran waxay leedahay Ilaah baa dadka dhumiya.
"Hadduu doono Eebe wuxuu idinka yeeli lahaa umad kaliya wuxuuse dhumiyaa cidduu doono, wuuna hanuuniyaa cidduu doono, waana laydin warsan waxaad camal falayseen." - Waa aayada 93 ee suurada 16 (suurat An-Naxl)
Labadaan aayadood ee kor ku qoran way kala hadlayaan ama is burinayaan, mid waxay leedahay ilaahey ayaa dadka dhumiya, mida kalena waxay leedahay shaydaan ayaa dadka dhumiya. taasna waxay ku tuseysaa in quraanka uu qoray bini aadan ee maxamad ah oo uu san ahayn hadalka ilaahey sababtoo ah quraanka haduu ilaahay hadalkiisa ahaan lahaa kala hadal ama is burin kuma dhex jiri lahayn. ilaahey ma caqli yara sida bini aadanka oo ma dhaho cidaan doono ayaan dhumiyaa kadibna dhaho waa laydin warsan waxaad camal falayseen.
Hiiraan, Somalia - nin soomaali ah oo gacan iyo lug laga jarayo
Posted by Maskaxda Xoree at 11:07 AM 3 comments: Links to this post